FJKM Ankadindramamy Fahazavana » Toriteny Alahady 23 Martsa 2014
Toriteny Alahady 23 Martsa 2014
Natao ny 27 Mar 2014, Pasitera: Atoa RAKOTONDRASOA Harijaona Andriatsarafara, Mpitandrina
2 Samoela.12 , 7 – 15 ; Lioka.15 , 11 – 24 ; 1 Timoty.1 , 12 – 16
2 Samoela.12 , 7 – 15 no Tenin’Andriamanitra rasina andraisana hafatra ho antsika amin’ity Alahady fahaefatra amin’ny volana Martsa ity. Tantara maneho indrindra ny namonjen’Andriamanitra an’i Davida tsy hilona anaty fahotana.
– Mampahatsiaro ny anjara toerana misy azy
– Mananatra amin’ny Teniny
– Mamindrafo amin’izay miaiky fa mpanota Izy.
1. Mampahatsiaro ny anjara toerana misy azy ( and.7 , 8 )
Fantantsika loatra ity tantara ity. Ny nakan’i Davida an’i Batseba vadin’i Oria sy ny namonoany ity farany. Teo anoloan’izany fahotana lehibe nataon’i Davida teo anatrehan’Andriamanitra izany dia nampahatsiaro azy ny anjara-toerany misy azy, ny fomba nitondran’Andriamanitra ny fiainan’i Davida manokana i Natana Mpaminany. Anjara toerana izay tena miavaka tokoa : teo ny fanosorana azy ho Mpanjaka, ny famonjena azy tamin’ny fahavalony, ny fanomezana azy izay rehetra ilainy teo amin’ny fiainana, ny fikarakarakana azy manokana amin’izay mahasoa azy. Kanefa toa adinony izany fitondran’Andriamanitra izany fa niroso nanao ny hadalana, niaina ny fahotana nandika ny didin’Andriamanitra izy ka tsy nionona tamin’izay anjara efa nomena azy fa naka ny anjran’ny hafa ihany koa. Toa tsy nahay nijoro, tsy naha nitoetra tamin’ny toerana sy anjara efa nomena azy. Azo ambara fa fampisaintsainana, fampieritretana an’i Davida, fanehoana ny lalana tsy mety nizorany izany fampahatsiahivana ny anjara toerana misy azy izao.
Ry Havana malala, ilay Andriamanitra mamonjy amin’ny fahotana dia mampahatsiaro tokoa ny olona ny anjara toerana efa misy azy. Rehefa fantatry ny olona tokoa mantsy ny anjara toerana, ny fomba efa nitondran’ Andriamanitra ny fiainany dia tsy tokoa hilona, na hikiry handeha hanota ny olona. Tsarovy ny tantaran’ilay zanaka adala araka ny Lioka.15 novakiana teo. Rehefa tsaroany any anjara toerana tokony hisy azy dia nandao ny tontolon’ny fahaverezana hiverina ho any amin’ny rainy izy. Rehefa miala amin’Andriamanitra mantsy ny olona, mikiry hanota dia ho tra-doza ny fiainany. Ry Havana malala, tsarovy ny anjra toerana efa nitondran’Andriamanitra ny fiainantsika. Zanany isika, efa nomeny , maty teo amin’ny hazo fijaliana namonjy, nanafaka antsika ny Tompo dia mbola hiroso hanota ihany ve isika. Mazava ny voalaza ao amin’ny 1 Jaona.3 , 9 : “Izay rehetra naterakn’Andriamanitra no tsy mahay manota, satria ny voany mitoetra ao anatiny, ary tsy mahay manota izy satria naterak’Andriamanitra”.
2. Mananatra amin’ny Teniny
Hafa mihitsy eto ny fomba nentin’Andriamanitra manafaka an’i Davida ao anatin’ny fahotana. Tantaran’ilay mpanankarena naka ny zanak’ondrivavin’ilay mahantra nataony sakafo no nataon’i Natana Mpaminany. Tezitra i Davida ka nanambara fa tokony iharan’ny fahafatesana ilay mpanakarena ( and.1 – 6 ). Azo ambara fa resy lahatra i Davida fa izay manao ny tsy rariny, maka ny fananan’ny hafa dia tena meloka. Tsy nisalasala noho izany i Natana Mpaminany nilaza fa ianao izany ry Davida. Araka ny Teninao dia tena meloka, tokony ho faty ianao satria naka ny vadin’i Oria sady namono an’i Oria. Fahotana lehibe, fahotana mahafaty no nataonao noho izany hihatra aminao ry Davida ny kapoka rehetra, ny loza samihafa ho famaizan’Andriamanitra anao ( and.9 – 12 ). Ary tena nihatra tamin’i Davida tokoa ireo nambaran’i Natana Mpaminany ireo ( and.10 ; Absaloma sy Adonia ( 2 Sam.18 / 14 ; 1 Mpanj.2 / 25 ) ; 2 Sam.16 / 22 ) . Io fananarana io dia fanitsiana an’i Davida mba hialany amin’ny lalan-diso nizorany.
Ry Havana malala, tsarovy fa tsy sitrak’Andriamanitra handeha amin’ny ditrin’ny fony ny olony. Miezaka mananatra sy manitsy Izy. Amin’ny alalan’ny Teniny izay ambarany amintsika, haintsika ve ny mandray ny fananarana ataon’ny Tompo amintsika fa te-hamonjy antsika amin’ny fahotana Izy. Raha misy toe-javatra mihatra amin’ny fiainana. Mandalo fahasahiranana lava izao, Kristiana tsy manam-piadana, tsy manam-pilaminana. Sao dia ataony mandalo fotoan-tsarotra ny olona ianao mba hialana amin’ny lalana diso hiverina amin’ny lalana marina hanao ny sitrapony indray. Jereo ny tantaran’ilay zanaka adala. Nomen’ny rainy fahalalahana ny amin’izay safidiny hitondrana ny fiainana. Rehefa izany anefa dia nataony nandalo fotoana sarotra. Ilay olona niadana teo amin’ny rainy fahizay, nanana ny fahafenom-piainana lasa nihinana sakafom-biby. Nitotongana ny fiainany. Nasehon’ Andriamanitra fa rehefa tafasaraka Aminy ny olona, rehefa mandeha amin’ny ditry ny fony ny olona dia tsy lavorary ny fiainany, rava ny filaminana, rava ny fiadanana. Endriky ny fananarana sy fanitsiana izany.
3. Mamindrafo amin’izay miaiky fa mpanota Izy
Tsy very main any fananarana nataon’Andriamanitra an’i Davida fa tena nandona ny atin’ny fony. Nahatsiarovany tena fa hay tena mpanota izy. Nanao tsinotsinona ny didin’Andriamanitra izy. Vokany niaiky heloka izany, niaiky fa tena mpanota izy. Izany hoe tena hita taratra teo amin’ny fiainan’i Davida ny fanetren-tena, ny fibebahana. Tsy nanamari-tena izy fa niaiky ny maha-mpanota azy. Izany mendrika ho azy ny atao “maty tokoa” araka ny teny voalazany ao amin’ny and.5,6 . Mazava anefa ny teny nomena azy : “Ny Tompo efa nanaisotra ny helokao ka tsy ho faty ianao” ( and.13 ). Na dia fahafatesana aza no didim-pitsarana efa naharihariny dia famindrompo lehibe kosa no azony. Tsy novonoina ho faty amin’ny fitoerana amin’ny fahotana izany fa namindrana fo mba ahafahany mitondra ny tombon’andro omen’Andriamanitra azy amin’ny fiombonana amin’Andriamanitra sy ny fankatoana ny sitrapon’Andriamanitra. Maneho fa mamindrafo aminy Andriamanitra satria manaisotra ny helony, manadio azy ary indrindra manao fifandraisana aminy.
Ry Havana malala, ambara eto indray fa tena famonjen’Andriamanitra antsika amin’ny fahotana ny fanehoany famindrampo amin’izay mahay miaiky heloka marina. Tsarovy ilay zanaka adala, rehefa nahatsiaro fa diso dia niverina nody tany amin’ny rainy. Niaiky marina fa mpanota ka te-hanorina fifandraisana vaovao amin’ny rainy. Tena nandray azy ny rainy, nitsena am-pitiavana sy amim-pifaliana, Famindrampo miavaka izany satria nandray azy am-pitiavana, nandray azy ho tena zanaka miaina amin’ny fiainam-baovao indray ( Lioka.15 ) . Toa izany koa Andriamanitra, tena mamindrafo amintsika izay mahatsiaro fa mpanota ka vonona hibebaka marina Izy. I Paoly Apostoly dia resy lahatra tamin’izany fa rehefa mahatsapa ny maha-mpanota azy izy ka mibebaka hiverina amin’Andriamanitra dia nahazo famindrampo lehibe tokoa ( Jereo.1 Timoty.1 / 12 , 13 ) .Ary mazava ny voalaza ao amin’ny Ohabolana.28 / 13 : “izay manafina ny fahotany tsy hambinina; fa izay mitsotra ka mahafoy azy no hahazo famindrampo”. Amena.